Mykes: otu a ka esi eme ka ndị na - ege gị ntị mara mma better - 💌 WebTK - Ticket gị WebTalK 🚀 Kpọọ, Nyochaa, Akụkọ & ọzọ 🔥
Mykes: otu a ka esi eme ka ndi na - ege gi ntị mara nma 💸
Mykes: ekele maka ịbụ otu n'ime ụzọ YouTube kachasị elu na Mongolia! 💐💐💐
Ma ị nwere ike ịme karịa nke ọma: inwere ike ibu otu n’ime ụzọ kachasị elu na Webtalk 🚀 ma mepụta ọtụtụ ego ha ga-enweta.
Webtalk bụ ntụgharị na mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-akwụ gị ụgwọ maka 50% nke ego niile. Mgbe ụmụazụ gị na-elele vidiyo gị, ị na-enweta ego. Mgbe ncheta gị na-eche ọ bụla vidiyo, ọbụlagodi ndị asọmpi gị, ị ka na-enweta ego. na Webtalk, akwụkwọ ndekọ gị ga-aghọ akwụkwọ gị azụmahịa maka ndụ dika ha n’enwetara gi ego eji ekari. Ekwenyebeghị? Lee ego ole ị ga-enweta Webtalk.
Were ya na 10% nke ndị na - eso gị nọ ugbu a iso Webtalk n’etiti otu gị ma bụrụ ndị gị ga - ekwupụta. Ole puku dollar ka nke ahụ ga-anọchite anya gị kwa ọnwa?
The mbu ị sonyere ma malite iwulite ndị na-ege gị ntị na Webtalk, ka ukwuu n’inweta ihe ị na-enweta. Igwe bu oke 🚀🚀🚀
Site na isonye na Webtalk Stars Team, ị nwere uru ọzọ: ị ga-enweta nkwado VIP na klọb yana ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ iji mee ka ndị na - ege gị ntị too. Ndị otu anyị raara onwe ha nye success. Ọtụtụ ndị na-eme ihe nkiri na ndị a ma ama na-atụkwasịlarị anyị obi maka na ị ga-adị n’udo.
You nwere ajụjụ ọ bụla gbasara Webtalk na ndi otu anyi? Alala azụ ịkpọtụrụ anyị na
* ozi echekwara *
Anyị na-ele anya ịhụ gị Webtalk oge adịghị anya n'ime otu kachasị mma maka gị! 💛💚💙💜
Ịga nke ọma gị!
Jacques-Louis Kreiss - Webtalk Stars Team onye nchoputa
Nkọwa ọwa gị:
Emelitere ikpeazụ December 3, 2019
Categories Youtubers na Webtalk Tags Mongolia, YouTuber, Youtuber na Webtalk Mail igodo
BACKYARD TV: otu a ga - esi eme ka ndị na - ege gị ntị zie ozi ọma 💸
Egwuregwu Mongolian RadioActive: nke a bụ otu esi eme ka ndị na-ege gị ntị mara mma 💸
Home - Youtubers na Webtalk - Mykes: otu a ka esi eme ka ndi na - ege gi ntị mara nma 💸